ကွက်ရှင် Time ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကွက်ရှင် Time ?
ကွက်ရှင် Time ?
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 17, 2015 in Critic | 18 comments
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် တို့ အစိုးရ ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး အတွက် ဒေါ်လာများစွာကြေးကြီး ပေး ငှားထား တဲ့
အမေရိကန်လော်ဘီ အဖွဲ့ကြီး ဘာတွေများ အလုပ်ရှုပ်နေကြသလဲ လို့ပါ။
.တော်ကြာ အစိုးရ လော်ဘီ ဆိုတော့ အတိုက်အခံ ကိုလဲ မသိမသာ ပညာတွေ ပြနေမစိုးလို့ မေးကြည့်တာပါ။
သူတို့ နဲ့ရောပြီး အသားထဲက လောက်မထွက် ကြပါစေနဲ့ လို့တော့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အဝင်မတော် အမြီးတစ် နေရင် ခက်ရော
ဒီလောက် မဲစာရင်း က ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ် ပွစာကြဲ အမှား တွေ ဖြစ်နေလဲ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ဒီ အတိုင်း ငြိမ်နေကြတယ်။
. ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တာ ၁၉၉၀ မှာတစ်ခါ၊ ၂၀၁၀ မှာ တစ်ခါ ဘာမှ ပြသနာမရှိပြီးခဲ့တာဘဲ။
အခု တတိယအကြိမ် မှာ ဒီချုပ် ပြန်ပါလာတော့ မှ အမှောက်ပယောဂပူးတာ ကို သက်သေပြနေပြီ။
ဒီတစ်ခါ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ပ က ပညာရှင် တွေတောင် ပါလိုက်သေး။
. ခေတ်ကလဲ ကွန်ပျူတာ ကို ကလေးကစားသလို လွယ်လွယ်သုံးနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲ က မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေ ကို စာရင်းစုထားဖို့ ဘာများခက်နေသလဲ။
ဒါကို တောင် အသေအချာကြီး ကို မှားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် က ယုံ နိုင်ဖွယ်မရှိတော့။
အဲဒီက နေ ရလာမဲ့ ရလာဒ် တွေ ကလဲ မှားတော့မှာအသေအချာဘဲ။
၊လေကြီး မိုးကြီး လုပ်ပြီး စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဖွဲ့များ ကလဲ မမြင်ကြဘူးလားမသိ။
တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသူက ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေလဲ သွယ်ဝိုက်တာဝန်ရှိသူများ က လဲ ငါနဲ့ မဆိုင်လုပ်နေတာ ရုပ်ဆိုးလွန်းလှပါတယ်။
ဒီအတိုင်းသာ ငုံ့ခံလက်စနဲ့ ခံလိုက်ကြပေဦး တော့။
မဲစာရင်းတွေ မှားလို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုအကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့တယ်ဆို ဘာလုပ်ကြမတုန်း။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘဲ လေတိုက်ပွဲနွှဲကြတာပေါ့။
အပြင်လူကို သူတို့ ယုတ်မာပုံတွေ ရှင်းပြမိရင်တောင်
“ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ အစိုးရလုပ်သမျှ ဘာလို့ ငြိမ်ခံနေတာတုန်း” တဲ့။
.ဘာသာရေးက သင်းသတ်ထားလို့ နေမှာပေါ့။ (သဂျီးလေအတိုင်းဖတ်ရန်)
ဗေဒင် နက္ခတ်အရ.. ဘယ်လိုတွက်တွက်.. ဒီချုပ်ကနိုင်ပေမယ့်.. အစိုးရတော့ မဖွဲ့နိုင်ပါတဲ့…။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ.. ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုမယုံကြနဲ့… ။
ဒီချုပ်က .. မသေချာဘူးထင်တဲ့ဒေသမှာ.. နယ်တောရွာအထိ.. တအိမ်တက်ဆင်း.. မဲဆွယ်ကြသင့်…။
ဒီချုပ်အမတ်တွေ.. အိမ်မပြန်ပဲ.. နေ့နေ့ညည.. အလုပ်လုပ်ကြ…။
ဆရာတော်ကြီးတွေ.. ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်တွေကို.. ဦးတိုက်ကြ..။
မဲစာရင်းက အရေးကြီးပေမယ့်.. Winner takes all မို့.. လူ ၁၀၀မဲထည့်ရင်.. ကိုယ့်ဖက်မှာ.. ၅၁မဲနဲ့.. နိုင်ဖို့သာအဓိက.. ဖြစ်ပါကြောင်း..။
.ဘယ်သူတက်တက် များများစားစား မျှော်လင့်မထားဘူး။ တိုင်းပြည်က သူတော်ကောင်း တအားများနေတယ်။ သူတော်ကောင်းဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် စကြောက်တွေ။ အဲသူတော်ကောင်းတွေ ဘာမှ သုံးမရပါဘူး။ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပဲ ထွက်ကြည့်။ ဂျပိုး သူခိုးအဆင့်မဟုတ်တဲ့ အဆင့်မြင့် လူမိုက်ဂိုဏ်း တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာမှ တက်လာတဲ့အစိုးရ သူ့အလုပ်သူလုပ်မှာပေါ့။ အဆင့်မြင့် လူသတ်ဂိုဏ်း တစ်ခုပဲ ထွက်ကြည့်စမ်း။ အစိုးရကို နားရွက်တံတွေးသွားဆွတ်။ မဟုတ်တာလုပ်တိုင်း လူသတ်ပြ။ လူသတ်တာ ရှိသင့်တဲ့ သဘောတရားအဖြစ် ပြည်သူက လက်သင့်ခံသွားရင် ဘယ်သူမှ နောင်မဟုတ်တာ လုပ်ရဲမှာ မှုတ်ဘူး။ အစိုးရနဲ့ သံဃာ တွေကို တကယ်စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ လူသတ်ဂိုဏ်း လူမိုက်ဂိုဏ်း တစ်ခု ထွက်လာကြည့်စမ်းပါ။
ကွန်​မြူနစ်​ တစ်​​ယောက်​​တော့ ​တွေ့​ချေပြီ ။ လူစုလိုက်​​လေ ။ ဘယ်​သူမှမလုပ်​ရဲရင်​ ရွာထဲက တစ်​ဂိုင်း​လောက်​ဖြစ်​ဖြစ်​ ​ထောင်​ရ​အောင်​ ( သူဂျီး မသိ​စေနဲ့ဗျ ) တိုးတိုးတိတ်​တိတ်​ ​လေး လိုက်​ပြီး စည်းရုံးကြည့်​ပါလား
အရင်တုန်းက စိတ်ကူးယဉ် ဖူးတယ် (ခုထိလဲ စဉ်းစားနေမိတုန်းပါပဲ။)
ဒီလောက် အဘ တွေကို နိုင်ငံတကာ က (အနောက်နိုင်ငံတွေ အဓိကပေါ့) ကြည့်မရဖြစ် စီးပွားရေးတွေ ပိတ်ဆို့ နဲ့ လုပ်နေတာ
ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို စီအိုင်အေ က တစ်ကောင်ကောင် လောက် လွှတ်ပြီး မသတ်ခိုင်းလဲ ဆိုပြီးတော့း)
.တော်ပါသေးရဲ့ ထောက်ခံတဲ့လူလေး ရှိလို့။ အဲ့လာ ပြောတာ။ ကိုလံဘီယာအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထု တစ်အုပ်မှာ အမ အဲဒါလေး ဖတ်မိတာပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ထိန်းတာ စိတ်အချရဆုံး။ အစိုးရကို ဓားထောက်ထားရမှာ။ ဟို ပရဟိတ သမားတွေ အလကား။ အလှူ ငွေကောက်၊ အိတ်ထဲထည့်။ တန်းမြင့် လူမိုက်ဂိုဏ်း တစ်ဂိုဏ်းသာ ထွက်စမ်း။ တကယ် သတ်ရဲဖြတ်ရဲတဲ့လူ။ ပြောရရင် ခရိုနီ လို လူတန်းစားတွေဟာ သူများထက် ပိုကြောက်တတ်တယ်။ မက်မောတတ်တဲ့လူတွေဟာ သူများထက် ပိုကြောက်တတ်တယ်။ မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ လည်း သိပ်ဝန်မလေးဘူး။ သူတို့တွေကို ထိန်းထားမယ့် လူမိုက်ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်း လောက် ထွက်ရင် မြန်မာပြည် ဒီမိုရပြီ။
ခြင်္သေ့လူမိုက် ခင်ဇော် ဦးစီးဦးဆောင်သော ရွာလူမိုက်ဂိုဏ်း ဆိုပြီး ထောင်ကြရင် ကောင်းမလားး)
.ကောင်းပါ့။ လူမိုက်ဂိုဏ်း ထောင်သင့်တယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ဘိန်းအထွက်တိုးအောင် လည်း လုပ်သင့်တယ်။ အခု ဘာဖြစ်လို့ ပြောင်းပြန်တွေ လုပ်နေသလဲ မသိဘူး။ ဘိန်းအထွက်ကောင်းပြီး ပြည်တွင်းပြန်မသုံးရင် ပြီးတဲ့ဟာကို
.အမေရိကန်လော်ဘီ အဖွဲ့ကြီး ဆိုမှသတိရတယ်..ဟုတ်ပ..ဘာသံမှမကြားမိပါဘူးဗျာ
ဒီ မေးခွန်း ထဲ က
အလုပ်စပြီး လုပ်နေပြီ ထင်ပါရဲ့။ lol:-))))
နောက်အစိုးရလက်ထက်မှာ.. ယူအက်စ်ဆန်ရှင်ပြုတ်ရေးက.. အမေရိကန်လော့ဘီအဖွဲ့ရဲ့အဓိကတာဝန်လို့ထင်တာပဲ..
ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ.. နေရာကြီးတခုရရင်တောင်.. ဆန်ရှင်က.. အလိုလိုပြုတ်မယ်… ထင်..။
ကျွန်မ ပြောလိုတာက အမေရိကန်အကြံပေး အဖွဲ့ကြီး ရှိရက် နဲ့ တရားစွဲ ခံ နေရရှာတာကို စိတ်ထဲမကောင်းလွန်းလို့ပါ။
ဇာတ်အဖွဲ့ကြီး ဇာတ်က နေတာကို ကြည့်နေရသလိုပါဘဲ၊
ရီစရာ၊ မောစရာ၊ အကြမ်း အရမ်း နဲ့ အခု ဟာက အလွမ်းလေးပေါ့။ lol:-))))
.ကြားပွဲစားတွေ က အမေရိကန်အစိုးရ ကဘဲ တရားစွဲသယောင်ယောင် ဆိုတော့ မျိုးချစ် တွေ ပေါ်လာပြီး သွားတိုက် ဖို့တဲ့။ စောင့်နေ ကြလေရဲ့။
အဲဒီအတွက်တောင် ကာတွန်း တွေ က ဂုဏ်ပြုနေကြပြီ။
ဘားမီးစ်နည်း မီးသွေး နဲ့ က အကောင်းဆုံးဆိုလား။
အမှတ်မမှားရင်.. အခုယူအက်စ်အစိုးရလက်ထက်လောက်.. မြန်မာပြည်လက်ရှိအစိုးရအပေါ်ဘက်လိုက်ပေးတာတောင်မရှိ..။
carrot and stick ပေါ်လစီမှာ.. carrot ချည်းပေးနေလို့တောင်.. အသားတွေဝါကုန်ပြီ..။
ယူအက်စ်ရောက်နေတဲ့..ဦးဝဏ္ဍမောင်လွင်တို့.. ကိုမိုးသီးဇွန်တို့နဲ့တွေ့ပြီး.. အဖြေတခုရအောင်.. ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်…။
အမေရိကားရဲ့တရားရေးစနစ်အရ အိုဘားမားအပါအ၀င် သူ့အစိုးရကိုလည်း.. လူထုက.. တသီးပုဂ္ဂလက.. ပြည်နယ်အစိုးရက.. လွှတ်တော်က.. တရားစွဲလို့ရပါသဗျ..။
ယူအက်စ်မှာ တရားစွဲတာမထူးဆန်း..။ ရှေ့နေခရှိရင်..တတ်နိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်..။
… ICC မှာဆိုရင်တော့ နည်းနည်းဆန်းမလားပဲ..။
House lawsuit against Obama is turning intoareal problem …
Aug 20, 2015 – An unprecedented House lawsuit against President Obama that was once derided asacertain loser looks stronger now and may soon deliver …